1 Ahene 19 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
1 Ahene 19:1-21
19 Na Ahab+ kaa nea Elia ayɛ nyinaa ne sɛnea ɔde nkrante akunkum adiyifo+ no nyinaa kyerɛɛ Yesebel.+ 2 Ɛnna Yesebel tuu ɔbɔfo kɔka kyerɛɛ Elia sɛ: “Sɛ ebedu ɔkyena sesɛɛ na memmaa wo kra nyɛɛ sɛ wɔn mu biako kra a, anyame no ntua me ka+ na wɔmfa bi nka ho!”+ 3 Na ehu kaa no. Enti ɔsɔre guan de peree ne kra,+ na okopuee Beer-Seba+ a ɛwɔ Yuda asase so.+ Ɛnna ogyaw ne somfo no wɔ hɔ. 4 Na ɔde n’ani kyerɛɛ sare so twaa da koro kwan, na ɔkɔtenaa sisia dua bi ase.+ Afei ɔsrɛe sɛ ne kra nwu, na ɔkae sɛ: “Afei de, mabrɛ! O Yehowa, gye me kra fi me nsam,+ na minye mensen m’agyanom.” 5 Afei ɔde ne ho too fam, na ɔfaa mu dae wɔ sisia+ no ase. Na hwɛ! ɔbɔfo+ bi bɛkaa+ no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Sɔre didi.” 6 Ɔnkɔhwɛ a, paanoo+ na egu abo hyehyeehye so na nsutoa nso wɔ n’atifi yi. Na odidi nomee, na ɛno akyi no, ɔsan dan ne ho too hɔ. 7 Akyiri yi, Yehowa bɔfo+ no san bae ne mprenu so bɛkaa no kae sɛ: “Sɔre didi, na akwantu no boro w’ahoɔden so.”+ 8 Enti ɔsɔre didi nomee, na ɔde ahoɔden a onya fii aduan no mu twaa kwan adaduanan,+ awia ne anadwo; ɔkɔe ara koduu nokware Nyankopɔn bepɔw, Horeb+ so. 9 Ɛhɔ na ɔkɔhyɛn ɔbodan+ bi mu sɛ ɔbɛda hɔ anadwo no; na hwɛ! Yehowa asɛm baa ne nkyɛn wɔ hɔ, na obisaa no sɛ: “Elia, dɛn na woreyɛ wɔ ha?”+ 10 Ɛnna ɔkae sɛ: “Ninkunu na matwe+ ama asafo Nyankopɔn Yehowa, efisɛ Israelfo agyaw w’apam,+ w’afɔremuka nso, wɔadwiriw agu,+ wɔde nkrante akunkum w’adiyifo,+ na me nko na maka;+ na wɔrehwehwɛ me kra ayi afi hɔ.”+ 11 Na ɔkae sɛ: “Fi adi kogyina bepɔw no so Yehowa anim.”+ Na hwɛ! ná Yehowa reba,+ na mframa kɛse a ano yɛ den di Yehowa anim repaapae mmepɔw bubu abotan.+ (Ná Yehowa nni mframa no mu.) Mframa no akyi no, asase wosowee.+ (Ná Yehowa nni asasewosow no mu.) 12 Asasewosow no akyi no, ogya bae.+ (Ná Yehowa nni ogya no mu.) Ogya no akyi no, ɛnne a ɛwɔ fam kasae bɔkɔɔ.+ 13 Bere a Elia tee ɛnne no ara pɛ, ɔde ne ntama kataa n’anim,+ na ofii adi kogyinaa ɔbodan no ano; na hwɛ! ɔtee nne bi, na ɛkasa kyerɛɛ no sɛ: “Elia, dɛn na woreyɛ wɔ ha?”+ 14 Ɛnna ɔkae sɛ: “Ninkunu na matwe ama asafo Nyankopɔn Yehowa, efisɛ Israelfo agyaw w’apam,+ w’afɔremuka nso, wɔadwiriw agu, wɔde nkrante akunkum w’adiyifo, na me nko na maka; na wɔrehwehwɛ me kra ayi afi hɔ.”+ 15 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ: “San sim kɔ Damasko+ sare so; kɔ na kɔsra+ Hasael+ na si no Siria so hene. 16 Nimsi+ banana Yehu+ nso, sra no na si no Israel so hene; na sra Safat ba Elisa+ a ofi Abel-Mehola+ no na yɛ no odiyifo ma onsi w’ananmu.+ 17 Na ɛbɛba sɛ nea obeguan Hasael nkrante+ ano no, Yehu bekum no,+ na nea obeguan Yehu nkrante ano nso, Elisa bekum no.+ 18 Na mama nnipa mpemnson aka Israel+ a wommuu nkotodwe nkotow Baal,+ na wɔmfew n’ano.”+ 19 Enti ofii hɔ kɔe, na okohuu Safat ba Elisa sɛ ɔrefɛntɛm asase,+ na anantwi mpamho dumien di n’anim, na ɔne nea ɛto so dumien no na ɛnam. Ɛnna Elia kɔɔ ne nkyɛn de n’atade+ koguu ne so. 20 Ɛhɔ ara na ogyaw anantwi no hɔ tuu mmirika dii Elia akyi kae sɛ: “Mesrɛ wo, ma minkofifew me papa ne me maame ano+ mfa nkra wɔn ansa na mabedi w’akyi.” Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Kɔ bra; masiw wo kwan anaa?” 21 Enti ɔsan fii n’akyi, na ɔfaa anantwi no abien kum*+ wɔn, na ɔde nnua a na esuso+ anantwi no mu yɛɛ nnyina noaa wɔn nam, na ɔde maa nkurɔfo no ma wodii. Ɛno akyi no, ɔsɔre kodii Elia akyi, na ɔsom+ no.
^ Hwɛ 1Sa 28:24 ase hɔ asɛm.
1 Ahene 19